May 23, 2020 - Lupyo News
အမျိုးသမီးများ ဒါတွေကြောင့် ရာသီထိန်တာ ရာသီမမှန်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်
May 23, 2020 by Lupyo News
အမျိုးသမီးများ ဒါတွေကြောင့် ရာသီထိန်တာ ရာသီမမှန်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော် 1. စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း စိတ်ဖိစီးမှုဟာ တဆင့်ခံဆေးလိပ်ငွေ့ကဲ့သို့ လူကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများချိန်မှာထွက်လာတဲ့ ကော်တီဇောဟော်မုန်း ရာသီမမှန်တာ၊ ရာသီသွေးဆင်းမှုနည်းတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ 2. အိပ်ရေးပျက်ခြင်း တစ်ညတာမှာ ပြည့်ပြည့်၀၀အိပ်စက်အနားမယူခြင်းကြောင့် ရာသီမမှန်ခြင်း၊ ရာသီလာရက်များခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ 3. ကော်ဖီအသောက်များခြင်း ရာသီလာချိန်အတွင်း ကော်ဖီသာမကလက်ဖက်ရည်နဲ့ အခြားသောကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေအသောက်များခြင်းကြောင့် ရာသီလာရက်နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကဖင်းဓာတ်ကလူကို နိုးကြားစေတယ်၊ ဆီးရွှင်စေတယ်ဆိုပေမယ့် တချို့လူတွေအနေနဲ့ ကော်ဖီသောက်ခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့အရည်တွေကိုသောက်တာများသွားတဲ့အခါ နိုးကြားမှုကနေ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပင်ကိုကတည်းကရာသီမလာမီနဲ့ ရာသီလာနေစဉ်အတွင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကိုခံစားရတတ်သူတွေအနေနဲ့ ကော်ဖီအသောက်များသွားပါက ဝေဒနာကိုပိုတိုးပြီး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ 4. ခရီးအမြဲထွက်နေသူဖြစ်ခြင်း ခရီးထွက်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိပ်စက်ချိန်မမှန်တာ၊ အိပ်ရာထချိန်မမှန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်စက်ချိန်မှာထွက်တဲ့ မယ်လတိုနင်ဟော်မုန်းကို … Read more
fbသုံးနေတဲ့မိန်းကလေးများဖတ်ရန်တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးပါ fbသုံးနေတဲ့မိန်းကလေးများဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအနည်းငယ်သာပြောင်း၍ရေးပါသည် တစ်နေ့ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။ အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။ ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြောကောင်းလွန်းလှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။”အပျိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကျမကို နည်းနည်း တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ခနလောက်ငိုင်နေပြီးမှကျမယောင်္ကျားနဲ့ ကျမ အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံ ပို့ပေးလိုက်တယ် ။ “ညီမတို့ ချစ်သူတွေလား “ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးက ကျမကိုကြည်နူးသွားစေပါတယ်ဘေးနားမှာ အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့သားလေးကိုမလုံမလဲ ကြည့်လိုက်မိတယ်ကျမယောကျား လူရိုးကြီးကတော့ယာတောကပြန်မလာသေးပါဘူး ကျမ ထင်လိုက်တာကတစ်ခါတည်းနားအေးအောင်ဆိုပြီးအမှန်ကိုချပြလိုက်တာမှ ပိုဆိုးသွားပါတယ် တိုတိုနဲ့လိုရင်းကိုပြောရရင်ကျမ တို့ နေ့တိုင်းဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဖုန်းမလာရင်ကျမကစခေါ်တတ်နေပါပြီကျမယောက်ျား လူရိုးကြီးကတောဘာမှမသိရှာပါဘူး။ သူ့ကတော့ ကျမကိုသိပ်ပြီးဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးယာတောနဲ့အိမ် ကူးနေတာနဲ့သူ့ကျွဲတွေနဲ့တင် အချိန်ကုန်နေရှာတာပါ။ ထင်ထားတဲ့အတိုင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းသူက ကျမကို သိပ်ချစ်ကြောင်းတွေပြောလာပါတော့တယ်။ ကျမအဖြေကိုတော့မပြောတော့ပါဘူးသူကတစ်ဆင့်တက်လာပါတယ်ကန်တော့ပါရှင်လင်မယားတွေကြားမှပြောရမဲ့စကားတွေကိုတစ်တစ်ခွခွပြောလာပါတယ်။ အစကနားမထောင်ရဲပေမဲ့နောက်တော့စွဲလမ်းလာပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့အပြင်မှာတွေ့ချင်တယ်တဲ့။ ကျမယောက်ျားနဲ့သားလေးမျက်နှာကိုဖြတ်ကနဲ မြင်ယောင်မိတယ်။ ကျမယောက်ျားကကျမကိုသိပ်ချစ်ရှာပါတယ်။ သူရှာဖွေထားသမျှ ကျမကိုအကုန်အပ်တယ်။ ကျမပျင်းနေမှာစိုးလို့ဆိုပြီးဖုန်းကိုတောင်သူမကိုင်ဘဲကျမကိုပဲပေးကိုင်ရှာတာပါ။ ငွေဆိုလည်းမစားရက် … Read more
ထမင်းစားဖို့ လင်ယူစရာမလိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချေနိုင်ဆုံးပဲ
ထမင်းစားဖို့ လင်ယူစရာမလိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချေနိုင်ဆုံးပဲ တချိန်ငါ့သမီးလေးကို ပြောပြရမယ် ထမင်းစားဖို့ လင်ယူစရာမလိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချေနိုင်ဆုံးပဲ တချိန် သမီးလေး သိဖို့ “ကိစ္စမရှိဘူး ငါတို့ကအချိန်တန်ယောက်ျားယူမှာ ယောက်ျားကရှာကျွေးလိမ့်မယ်”တဲ့ဘာရယ်မဟုတ် ပြုံးတော့ပြုံးမိသား…. ၁၆နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးကသိပ်ရိုးရှင်းတယ်လို့တွေးရင်တွေးလို့ရသလိုအန္တရာယ်များလိုက်တာလို့တွေးရင်လည်းတွေးလို့ရနိုင်တာကိုး…. သမီးတို့အနေနဲ့ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားရုံနဲ့အရာရာအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်နေကြတာတွေထမင်းစားဖို့အတွက် ယောက်ျားယူလိုက်မယ်လို့ခပ်လွယ်လွယ်တွေးလိုက်တာတွေသိပ်များနေပြီလားလို့လည်းတွေးမိပါ့… ခုခေတ်ယောက်ျားတွေ(အများစု)ကအတွေးအမြင်တွေပြောင်းကုန်ကြတာသမီးတို့မသိသေးတာလား? ယောက်ျားတွေကအလုပ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုယ်ကသိပ်ရုန်းပေးစရာမလိုတဲ့မိန်းကလေးကိုပိုသဘောကျကြတယ်ဆိုတာ… ငွေရှိရင်ရှိ မရှိရင်ပညာတတ်ရာထူးရှိမှပိုသဘောကျကြတယ်ဆိုတာ… အလုပ်လုပ်တတ် စီးပွားရှာတတ်အမြင်ကျယ်တဲ့မိန်းကလေးကိုမှပိုတွဲချင်ကြတယ်ဆိုတာ.. သူတို့ကိုအစစအရာရာသိပ်မမှီခိုတဲ့အရည်အချင်းရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုမှတန်ဖိုးပိုထားကြတယ်ဆိုတာ… ငါ့သမီးတို့သိအောင်ပြောပြချင်ပါဘိ… ယောက်ျားလုပ်စာလက်ဖြန့်တောင်းပြီးအိမ်မှာပဲ ထမင်းချက် ကလေးထိုင်မွေးမယ့်မိန်းကလေးမျိုးကိုသိပ်မရွေးချင်ကြတော့ဘူးဆိုတာလည်းပြောပြချင်သေးတယ်(တချို့တွေကိုဆိုလိုတာနော်အားလုံးလို့မပြောဘူး) ခုခေတ်ယောက္ခမတွေကရော….. အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ချွေးမကိုဘယ်လိုကြိုဆိုကြသလဲဘာပညာမှမတတ်ဘာအလုပ်မှမလုပ်တတ်ဘယ်နေရာမှဝင်မဆန့်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုဝမ်းသာအားရကြိုဆိုမယ့်ယောက္ခမမျိုးသိပ်ကိုရှားသွားပြီဆိုတာငါ့သမီးတို့သိပါလေစ… အိမ်ထောင်မပြုခင်လူ့လောကအတွက် အခက်အခဲတွေတွေ့ရင်ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်မိဘတွေကလက်နက်မျိုးစုံတပ်ဆင်ပေးနေတာကိုငါ့သမီးတို့သိပါလေစ… ရော့ ပညာလက်နက်ငါ့ပညာနဲ့ငါလုပ်စားလို့ရတယ်လင်မျက်နှာ ယောက္ခမမျက်နှာကြည့်စရာမလိုဘူး ရော့ အတွေးအခေါ်လက်နက်ဘယ်ဟာအကောင်း ဘယ်ဟာအဆိုးငါခွဲခြားနိုင်တယ် ရော့ အလုပ်အကိုင်လက်နက်ငါ့မှာအလုပ်အကိုင်ရှိတယ်အသိုင်းအဝိုင်းရှိတယ်ငါ့တစ်ဝမ်းတစ်ခါး ငါရှာစားနိုင်တယ် အဲဒီလိုလက်နက်တွေပါသွားတော့ပိုမကောင်းဘူးလား မွေးရာပါလက်နက်ဟာတစ်ဘဝလုံးအတွက်အာမခံချက်မရှိဘူးဆိုတာငါ့သမီးတို့ကိုပြောပြမယ့်သူမရှိဘူးလား… ပညာကမစုံအတွေ့အကြုံကမရင့်ကျက်အလုပ်အကိုင်ကမရှိနဲ့လင်ယူလိုက်ရုံနဲ့ဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူး ငါ့သမီးတို့…လင်ယူလိုက်မှဒုက္ခတွေစတာဆိုတာပြောပြချင်လိုက်တာ… တကယ်လို့များသမီးလေးတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ယောက်ျားဟာကုတင်ပေါ်မှာပဲ … Read more
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးညပြီး နော က်ေ န့ နေ့လည်ထိ မထွက်နိုင်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးညပြီး နော က်ေ န့ နေ့လည်ထိ မထွက်နိုင်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ ကိုမောင်ကောင်းနဲ့မချောဘုံတို့ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး အကြင်လင်မယားဘ၀ရောက်ြ ကပါတယ် …။ နှစ်ဘက်မိဘကလဲ ပြည့်စုံလှတာမဟုတ်တော့ မင်္ဂလာစရိတ်လေးရဖို့တောင် နှစ်တော်တော်ကြာ စုခဲ့ရတာလေ …။ ဒီတော့သူများတွေလို ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွေ၊ ဘာတွေလည်း မထွက်နိုင်ပါဘူး …။ ကိုမောင်ေ ကာင်းမိဘအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဦးညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ် …။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုမောင်ကောင်းရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ မောင်ရွှေအေးဟာ ကျောင်းသွားခါနီး အမေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မနက်စာကို စားနေရင်း … “အမေ …။ အကိုနဲ့အမ ထကြပြီလား …” “မထကြသေးဘူး …” “ကျနော်တွေးမိတာကတော့ …” “ကိုယ့်ဖာသာ စားမှာကိုမြန်မြန်စားစမ်းပါဟာ …။ တော်ကြာကျောင်းေ နာက်ကျနေ အုန်း မယ် …” ဒီလိုနဲ့ … Read more
မင်္ဂလာဦးညမှာပဲ သတိပါလစ်သွားခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီး ရဲ့ အဖြစ်လေးပါ ….
မ င်္ဂ လာ ဦး ည မှာ ပဲ သတိ ပါလစ်သွား ခဲ့ ရ သော သတို့သမီးရဲ့ အဖြစ် မင်္ဂလာဦးညမှာပဲ သတိပါလစ်သွားခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီး ရဲ့ အဖြစ်လေးပါ …. ။ ” မင်္ဂလာ ဦး ည ရင် ခုန် သံ ” ” အားးးးးးး!!!” ​အော်​သံကြား ​ပေ မယ့် ဒါသဘာဝပဲ​လေဆိုပြီး အိမ်​သားများ မသိချင်​​ယောင်​​ ဆောင်​​နေလိုက်​ သည်​​ … … ။ မင်္ဂလာဦးည ​ပေးကိုးးးးး​ အော်​သံကြားပြီး သိပ်​မကြာ လိုက်​. . . လူပြိုကြီး​ Moe Aung အသံနက်​ကြီးဖြင့်​ ” အ​မေနဲ့အ​ဖေတို့ရေလာကြပါဦး … Read more
မော င်လေး”မ မရဲ့ ဂါ ဝန် လေး ချွတ်ေ ပး ပါ
မော င်လေး”မ မရဲ့ ဂါ ဝန် လေး ချွတ်ေ ပး ပါ တ ညနေ.ရွာအစွန်က ညိုမြတို့ တဲ အိမ်လေး ခလေးသုံး,လေး,ယောက် ဝါးထရံ ပေါက်မှာ စုပြုံ ကြည့်ေ နတာ တွေတော့ ကျွန်တော်လဲ . . .. ကလေးတွေ ဘာကြည့်နေတာလဲ စပ်စုခြင်တာနဲ့. အိမ်ကလေးနား သွားပြီး..ထရံပေါက် ရှာတာပေါ့.. ကံဆိုး ချင်တော့ ထရံပေါက် ရှာမရ ဖြစ်နေ တယ်ဗျာ ဆိုးလိုက်တဲ့. ကံ .မထူးပါဘူး ဆိုပြီး ရုပ် မမြင်ရလဲ .အသံလေးပဲ နား စွင့်မယ်ဆြိုပီး..ဝါးထရံ လေး နားကပ်ြပီး တော. ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံတွေကြောင့် ဆံပင်တွေ တောင် ထော င်ထွက်သွားတယ် … Read more
အပျိုစင်နဲ့ မိန်းမတန်ဖိုး ခေတ်တွေ ပြောင်းလဲ လာပါတယ်။လက်မထပ်ရသေးခင် living togetherဆိုတဲ့ အနေအထားကို လက်ခံကျင့်သုံးသူတွေ များလာပါတယ်။ ဒါကို မနေသင့်ဘူးမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးအများစုကို တားမြစ်နေလို့ မရတော့ပါဘူး။ ခက်နေတာကမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အရလည်းခုထိ ဒီလိုအနေအထားကိုလက်မခံနိုင်ကြသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်LT ကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ လက်မခံနိုင်ကြတဲ့ရှေးရိုး အစဉ်အလာကြားနစ်နာသူတွေက မိန်းကလေးတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ ခုခေတ်မှာမိန်းကလေးတွေဟာဟိုးအရင်က မိန်းမများနဲ့မတူယောက်ျားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီးပညာ အလုပ်အကိုင် လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ရပ်တည်နေကြပါပြီ။ ယောက်ျားတွေနဲ့တန်းတူ မရပ်တည်နိုင်သေးတာတစ်ခုက LT ပြသနာပါပဲ။ အကြောင်းမညီညွှတ်လို့လမ်းခွဲကြတဲ့အခါယောက်ျားလေးတွေမှာ အပြစ်မရှိမိန်းကလေးတွေသာအပြစ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာသွေးသား မရှိတဲ့ လူသေတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ သူကဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လိုနေခဲ့တာ။ငါနဲ့ဘာဖြစ်ပြီးသားပါ ဆိုတဲ့(အောက်တန်းကျလွန်းတဲ့)တစ်ချို့သော ယောက်ျားလေးတွေစကားတွေအောက် သုံးစားမရသလိုဖြစ်နေကြရတာ မိန်းကလေးတွေဘဝပါပဲ။ မြန်မာပြည်ရောက် LT ဟာအဓိက ယောက်ျားလေးတွေသွေးသားတစ်ခု အတွက်သီးသန့် ရောက်ရှိလာတဲ့အရာ တစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီးမိန်းကလေးတွေ အတွက်တော့အရှက်ကွဲစရာ ရှုပ်ချစရာ တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ LT … Read more
လိင်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့စိတ်ဝင်စားမှု Dr. K Zin Thwe | ရေးသားသူ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနဲ့ အတူ လိင်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေ သိသာလာပါတယ်။ အခုခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာတော့ သူ သို့မဟုတ် သူမရဲ့ လိင်အမျိုးအစားကို မေးခွန်းထုတ်ရတယ်ဆိုတာ မဆန်းတော့ပါဘူး။ လိင်စိတ်ဝင်စားမှု လိင်စိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာ တခြားသူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ခံစားရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ လိင်စိတ်ဝင်စားမှုအမျိုးအစားတချို့ရှိပါ တယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်း (Heterosexual) ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေကို Heterosexual လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားတွေက စိတ်ဝင်စားတာ၊ အပြန်အလှန်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားမှု (Homosexual) ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားခြင်း နဲ့မတူဘဲ လိင်တူချင်း လိင်မှုရေးရာစိတ်ဝင်စားတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေကို အမျိုးသားမှာရော၊ အမျိုးသမီးမှာပါ ဂေး(Gay) လို့ … Read more
အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ရန်ဖြစ်ရာမှ ရန်ပွဲကိုဖြန့်ဖြေပေးသူ ဓားထိုးခံရပီး သေဆုံး ရုပ်သံ
အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ရန်ဖြစ်ရာမှ ရန်ပွဲကိုဖြန့်ဖြေပေးသူ ဓားထိုးခံရပီး သေဆုံး ရုပ်သံ ဒီဗွီယိုဖိုင်ကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလေမြို့မှ ရပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်းမှာ လူတစ်ယောက်ကို ၀ိုင်းရိုက်ကြတဲ့ ရန်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အရိုက်ခံရတဲ့ လူငယ်မှာလည်း အတော်လေးအထိနာနေပါတယ်။ လက်လွန်ချေလွန်ဖြစ်မှာ စိုးတဲ့အတွက် ၀င်ရောက်ထိမ်းသိမ်းဖြန့်ဖြေပေးသူကို တစ်လူတစ်ယောက်မှ ပြေးဝင်လာပီး ဓားနဲ့ထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်နံကြားလောက်ဆီကို အထိုးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပီး ဆေးရုံမရောက်မီ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ရခဲလှတဲ့လူဘ၀မှာ ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ပီး အချိန်တွေကုန်နေကြအုံးမှာလား၊ အသက်တွေဘ၀တွေ ပေးနေကြရအုံးမှာလား။ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ခဏတာလေးပါ။ အဲဒီအချိန်ခဏတာလေးမှာ ဘ၀ကို အကျိုးရှိရှိနေတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။ သေဆုံးသူမှာ အသက်သုံးဆယ်ခန့်သာရှိသေးပီး သမီးသုံးယောက်နဲ့ သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ကျန်ရစ်တဲ့ ဇနီးသည်နဲ့ သားသမီးတွေ ဘယ်လောက်ပူဆွေးသောက ရောက်နေကြမလဲဗျာ။ ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ မကောင်းပါဘူး။ အခုတော့ ဖြန့်ဖြေပေးသူတစ်ယောက်က အသက်ပေးလိုက်ရပါပီ။ ဒီဗွီယိုလေးကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုတာ ဆင်ခြင်ရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ #သာဂိ … Read more
ကိုယ့်အမရဲ့ သတိုးသားလောင်းကို မြူဆွယ်မိတဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့ ဖြစ်ရပ်
ကိုယ့်အမရဲ့ သတိုးသားလောင်းကို မြူဆွယ်မိတဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့ ဖြစ်ရပ် လက်မထပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ်။ သူ့အိမ်လည်း ရောက်သွားရော့ တအိမ်လုံးမှာ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ်။ သူ့ညီမလေး ဘယ်လောက်ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလဲဆိုတာ ပြောရင် ယုံမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်အုံး အဲ့ဒီနေ့မှာမှ အဲ့ဒီကောင်မလေးက (မီနီ-skirt) တိုတိုလေးကို ဝတ်ထားပြီး အတွင်းခံဘရာစီယာလည်း ဝတ်မထားဘူး…။ အဲ့ဒီကောင်မလေးက ပြောတယ် သူ့အစ်မက အခုဆို အရေးကြီး ကိစ္စနဲ့ အပြင်ကို ထွက်သွားတယ်…။ ညနေမှ ပြန်လာမည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြဖို့ သူ့ကို မှာထား တယ်တဲ့…။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ထဲမှာ သူ့ညီမလေးနဲ့ စကားပြောနေတုန်း သူ့ညီမလေးက … Read more
January 2021 (322)
July 2020 (433)
© 2021 Lupyo News • Built with GeneratePress